Nyanzvi dzeMutemo Dzopa Maonero Akasiyana paNyaya yeMutemo Unorambidza Kupfekwa kweNhumbi Dzine Ruvara rweMapato muParamende
Kubvumbi 07, 2022
Nhengo dzebato idzva reCitizens Coalition For Change dzakapinda mudare repamende dzakapfeka midzipanyota ine ruvara rwebato izvo zvakaita kuti dzirambidzwe kupinda
Nyanzvi mune zvemitemo dziri kupa maonero akasiyanasiyana pamusoro pedanho rakatorwa neparamende neChitatu, rekuedza kurambidza nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change kupinda muparamende dzakapfeka nmidzipanyota kana kuti ma tie eruvara rwe yellow, rwunove ruvara rwebato radzinomirira.
Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNCA, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vanoti iyi haisi nyaya huru kwete, asi bumbiro remitemo haritaure kuti kana uchipinda muparamende unopfeka hembe dzakadii asi kuti rinozvisiira kuvanhu vari muparamende kuti vasarudze kuti pachezvavo vanoda kupinda sei?
Muzvinafundo Madhuku vapa muenzaniso wekuti munhukadzi anenge achida kupinda muparamende anokwanisa kurambidzwa kupinda achinzi akapfeka mbatya dzinonzi dzinoburitsa muviri wake panze, asi kana vanhukadzi vakati zvatinofamba takaita kunze ndizvo zvatinoda muparamende, zviri kuvanhu kuzvidzigira kana kuzviramba.
Rimwe gweta vari nhengo yeZanu PF kuBritain, VaSimba Mavaza, vanotiwo bumbiro remitemo pamwe nemitemo yeparamende hazvibvumire kuti munhu apinde muparamende akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebato raanotsigira.
VaMavaza vanoti kunyange hazvo paramende yakazobvumidza nhengo dzebato reCCC idzi kupinda mudare, hazvirevi kuti vave kubvumidzwa kuramba vachiita madiro aJojina, vachiti pakatoumbwa komiti iri kuferefeta nyaya iyi nekutarisisa zvinorehwa nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders.
Asi rimwe gweta, vari nhengo yebato reCCC, VaJacob Mafume, vanoti zvakaitika muparamende mucherechedzo wekuti paramende pamwe nenhego dzeZanu PF vave kutya kudzoka muparamende kwepfungwa dzavanoti dzakapinza, vachiti hapana mutemo unorambidza munhu kupinda akapfeka ruvara rwaanoda.
Nemusi weChipiri nhengo yeparamende inomirira Buhera South VaJoseph Chinotimba ndivo vakatanga kusimudza nyunyuto mudare paitoreswa mhiko vadare vatsva, yekuti sei nhengo dzeCCC dzakabvumidzwa kupinda mudare dzakapfeka ruvara rwebato radzo.
Izvi zvakaita kuti mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, varambidze kupfekwa kwemidzipanyota ye yellow iyi.
Asi neChitatu dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakatungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato vari mumiriri weHarare East, VaTendai Biti, hadzina kuteerera VaMudenda sezvo dzakadzokera zvakare kuparamende dzakapfeka midzipanyota ye yellow, izvo zvakazoita kuti paite mhirizhonga dzichirambidzwa kupinda.
Hurukuro naVaJacob Mafume naVaSimba Mavaza